Ala na-adabere na mbara igwe dị larịị ọkụ 60W China Manufacturer
Nkọwa:Igwe na-acha ọkụ na-acha ọkụ,Ogige Uhie,Okirikiri okporo ụzọ na oghere
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Okpomọkụ na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala > Ala na-adabere na mbara igwe dị larịị ọkụ 60W
Ihe Nlereanya.: BB-LD-S-60W
Eji Mbara Igwe Na- acha Igwe Mmiri jiri SMD LED ibe. Nke a na- enwu oghere nke anyanwụ na- abịa n'ọtụtụ nhọrọ: 30w, 40w, 50w, 60w na 80w. All the Led Street Light with Pole solutions are vasatail, na ike ịghọ ma ala ma ọ bụ ogwe osisi, n'ihi na nke ọ bụla oru ngo. Usoro ndị a kwadoro site na afọ 5 zuru ezu ikike, na-enye gị udo nke uche iji họrọ nke azụmahịa azụmahịa kwadoro na-adọba ụgbọala na-emepụta mpempe ọkụ ngwọta na-enweghị atụ egwu nke mkpa ịkwere na ndị ọkachamara ọkachamara na gị mkpara. Ike anyanwụ na-eburu ọkụ ọkụ usoro dị 100% kwadoro site na ike anyanwụ. Nzuzu ya nwere ọgụgụ isi, ike na-enye ya ohere ịnye ọkụ na-agbanwe agbanwe, nke a pụrụ ịdabere na ya site na mgbede ruo ụtụtụ, n'afọ nile.
Igwe na-acha ọkụ na-acha ọkụ Ogige Uhie Okirikiri okporo ụzọ na oghere Igwe na-acha ọkụ na-acha ọkụ ọkụ 20W Igwe na-acha ọkụ na-acha Anyanwụ na-acha ọkụ na-acha ọkụ ọkụ Ala na-acha ọkụ ọkụ Ndị na-acha ọkụ ọkụ